२०७७ श्रावण १७ शनिबार २१:५९:००
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । निगमले शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. दुईले वृद्धि गरेको छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर रु. १.५० ले वृद्धि गरेको छ ।
निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार पछिल्लोपटक इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही बढेर आएकाले मूल्यमा केही वृद्धि गरिएको हो । यसअघि पेट्रोल प्रतिलिटर १०२ रुपैयाँ रहेकामा अब भने रु. १०४ पुगेको छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ८८ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकाेमा अब बढेर रु. ९० पुगेको छ । निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा भने मूल्य वृद्धि गरेको छैन ।
निगमले हालको मूल्य समायोजनपछि पनि भारतीय सीमा रक्सोलसँग जोडिएको नेपालको सहर वीरगन्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ आठ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ३६ रुपैयाँ ६९ पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको छ । नेपालतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुँदा अनधिकृत रूपमा भारततर्फ तस्करीसमेत हुने गरेको छ ।
निगमले यसअघि भने जुलाई १६ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको हितलाई हेरेर मूल्य वृद्धि नगरेकोसमेत स्मरण गरेको छ ।
#पेट्रोलियम पदार्थ # मूल्य बढ्यो
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेविसंघले गऱ्यो प्रदर्शन
कति छ खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात ?